SOMALI THINK TANK » Duruusta ku Duugan Dulqaadka!
You are here: Home / Culture, Featured Articles / Duruusta ku Duugan Dulqaadka!
Dadka duu-duulka badan waxay badanaa ku wareeraan waanada ku aadan deganaanshaha iyo dulqaadka looga baahanyahay nolosha. Diinta xataa waa lagu xusay wacdi ku saabsan dulqaadka waxaana dadka dulqaata loo ballan qaaday darajo ka duwan martiqaadka maalinta qiyaame loo fidin doona dadka duul-duulka badan ee daqiiqad kasta iska daalan.
Inkstoo waanada loo cuskaday waayo aragnimada nolosha iyo wacdiga diimaysan si daran uga digeen duul-duulka badan, haddana dadka ku daalay duul-duulka joogtada ah looma soo bandhigo duruus cilmiyaysan oo laga soo dhiraadhiriyay degenaanta dabiiciga ah ee aan looga maarmin maaraynta nolosha. Sidaa daraadeed qoraalkan wuxuu dadka marwalba iska dedaala la wadaagaya duruusta ku duugan dulqaadka.
Darsi lama filaan ah oo ku saabsan faa’iido la’aanta laga filan karo fudeydka ayaa maanta ku baraarugay mar aan bannaanka u doontay qaxwe iyo qaraaxo! Badanaa maalmaha Axadda busaska ka shaqeeeya Toronto way daahaan oo sida maalmaha kale durba ma soo muuqdaan. Dad daris ah iyo aniga ayaa qaddar daqiiqado kooban ku sugnay gaari magaalada aan u raacno goob basuska istaagaan oo u dhow guriga aan daganahay.
Maadama aan ka tirsanahay jamaacada duul-duulka badan ee aaminsan in marwalba la iska dadaalo, waxaan goostay in aan lugeeyo mar haddii bus soo muuqda uusan jirin. Markaan daqiiqado ku lugeeyay hawo xoogaa qabow, oo meel dheerna aanan gaarin ayaan arkay buskii oo i garab maray iyo dadkii dariska ahaa ee aan ka soo lugeeyay oo buska dhexdiisa Rabi ku xasuusan ama sheydaan kula sheekaysanaya waayo dadka aduunka ku nool waxay qaybsamaan koox rabi caabuda iyo jamaaco shaydaanka u camira sheekada!
Maadama qofka Soomaaliga ah in laga raayo uusan jeclayn, waxaa nafta ku sababay in dadaalkayga iyo dabeecadayda cuskan duul-duulka aan ka faa’iday waayo waxaan helay xoogaa jimicsi iyo luga baxsi ah. Marka laga soo tago niyad dhiskaas caatada ah waxaa maskaxdayda u muuqday cashar aan ka baran karo dadkii dariska ahaa ee dulqaadka muujiyay kuwaas oo hadda laga yaabo in masaafo aad u fog oo magaalada dhexdeeda ah mushaaxayaan.
Badanaa dadka iyo dawladaha dulqaadka muujiya waxay ka hormaraan dadka iyo dawladaha ku dufoobay duul-duulka iyo sal fudeydka. Tusaale ahaan, dawladaha dariska la ah Soomaaliya waxay muujiyeen dulqaad ku haboon duruufihii u gaarka ah waqtigii Afrika ka xorowday gumeystaha. Waqtigaas dawladdii Soomaaliya ma aysan muujin dulqaad waayo waxay durba dareentay in ay waajib ku tahay in dagaal iyo dadaal dheeri ah loo galo xoreyta Soomaalida kale ee xoolaha ku raacda geeska Afrika.
Duul-duulkaas waxaa laga dhaxlay in xoola dhaqatadii la xoreenayay ay maanta nolol dhaamaan Soomaalidii u soo duushay in ay gumeysiga ka dulqaadaan. Waxay u badantahay in guud ahaan nolosha dadweynaha Soomaaliyeed maanta deganaan ka muuqan lahayd haddii dawladii Soomaaliya ee burburtay muujin lahayd dulqaad la mid ah dulqaadkii ay maanta muujiyeen dadka dariska ah ee daqiiqado ka hor xawaaraha igu dhaafay ayagoo dhexenta dhacaysa ka dugsanaya buskii aan ka soo lugeeyay!
Mararka qaar dulqaadka noocan ah waxaa looga baahanyahay suuqa shukaansiga iyo shaqada. Waxaan aqaan dad badan oo shaqo yar oo ay haysteen ka lugeeyay ayaga oo aaminsan in la gaaray waqtigii lagu dadaali lahaa helitaanka shaqo dhaanta shaqada ay ka dhaqaajiyeen. Muddo markii la joogay, kooxaha duul-duulka badan ee shaqada ka tagay waxay ku baraarugaan dadkii shaqada u dulqaatay oo heersare ka gaaray suuqa shaqada.
Sidoo kale waxaan arkay duul-duul iyo daganaansho la’aan badanaa ka muuqata gabdho badan oo suuqa shukaansiga aan ku sheekaysannay. Tusaale ahaan mid ka mid ah gabdhahaas ayaa hadda ka hor waxay go’aan ku gaartay in bacda banaan la ii dhigo waayo waxay suuqa shukaansiga kula kulantay mid ay ka heshay duul-duulkiisa balse ahaa doqon is qarinayay. Maqaadiirta waxay qorsheeysay in xariifaddii iyo aniga markale ku kullano suuqa shukaansiga ayadoo ka shallaynaysa dulqaad-la’aantii sababtay in bacda banaanka la ii dhigo.
Waxaan niyadda ugu dhisay in duul-duulkeedii aan lagu qasaarin waayo waxaa ka muuqday xoogaa jimicsi iyo lugo baxsi ah!
Muddo laga joogo toban sano ka hor waxaan magaalada Nairobi qol wada daganayn nin ka qalin jabiyay kuliyadda lagu barto cilmiga duul-duulka. Maalin walba ninkaas wuxuu maagi jiray qolka aan dagannahay, muddo ka dibna wuxuu go’aansaday in uu meelaha ka day-daydo qol dhaama midkii aan markaas wada daganayn. Muddo ka dib waxaan magaalada ku arkay ninkii oo deegaan la’aan ah oo raadinaya dad uu la dago!
Duul-duulka iyo degnaansho la’aanta waa xukun ay maqaadiirto qorsheeysay malaayin sano ka hor. Inkastoo maqaadiirtu waa hore qondeeysay qof walba inta uu qayb ahaan u heli doono dulqaad ama duul-duul, haddana waxaa fiican in mararka qaar nolosha laga soo dhiraadhiriyo duruusta iyo waayo aragnimada cilmiyaysan ee lagu caawin karo wacdiga iyo waanada diinta u qoondeeysay darajooyinka u gaarka ah dulqaadka. Dulqaad la’aantii maanta baska iiga tagay waxaan ka dhaxlay in muddo aan ka fekero dhibaatooyinka laga dhaxli karo duul-duulka joogta ka noqday dhaqanka guud ee Soomaalida!
W/Q: Cabdullaahi . M. Cawsey